နတ်ရှင်၊ ဒဂုန် - ဝီကီပီးဒီးယား
↑ မောင်သုတ အမည်ခံ ဗိုလ်မှူး ဘသောင်း (မဟာဝိဇ္ဇာ၊ ရွှေတံဆိပ်ရ) (၁၊ ဩဂုတ်၊ ၂ဝဝ၂). in ဦးခင်အေး (မောင်ခင်မင်၊ ဓနုဖြူ) ပါမောက္ခ၊ မြန်မာစာ ဌာန၊ ရန်ကုန် တက္ကသိုလ်: စာဆိုတော်များ အတ္ထုပ္ပတ္တိ, ပဉ္စမအကြိမ်, ရာပြည့် စာအုပ်တိုက်ထုတ်။
↑ ဒဂုန်ရွှေမျှား. မြန်မာနိုင်ငံ စာပေဆုများ, စာ ၅၃ - ၅၄။
↑ မလိခ. မြန်မာစာပေ အဘိဓာန် ၃, စာ ၁၃၄ - ၁၃၅။
↑ မြန်မာ့စွယ်စုံကျမ်း နှစ်ချုပ် ၁၉၉ဝ, စာ ၂၁၉ - ၂၂၂။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=နတ်ရှင်၊_ဒဂုန်&oldid=521001" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၂၂ ဇွန် ၂၀၂၀၊ ၀၄:၅၆ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။